true organizing /zu-ZA/tools-for-life/organizing/steps/what-is-organization.html read 1 6 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/organizing_zu_ZA.jpg OkuyisiSekelo sokuHlela
Uyemukelwa kwi-Online Course yezokuyisiSekelo sokuHlela
Siyakwazi ukubona ukuthi ukube izinto bezihleleke kangcono, abantu bebengaphila kangcono kakhulu. Sonke sike sadlula ezimweni zamabhizinisi noma nohulumeni, isikole noma iqembu elingahlelekile kahle futhi saba nokudideka, ukubambezeleka kanye nezinkinga zokuzama ukubhekana naleyo-disorganization.
Ukuzama ukuqala okuthile—icebo, umbono othile omusha onawo, mhlawumbe ukuqala ibhizinisi elisha—ngaphandle kokukuhlela kahle kungaba yinto enzima nebuhlungu. Ukuhlela kahle yikho okwenza impumelelo ibe khona yomuntu siqu sakhe, ebhizinisini, empilweni yomndeni, ezintweni zokuzijabulisa nanoma yimiphi imisebenzi yeqembu ongahle uhlanganyele kuyo. Ukufeza imigomo yakho, noma ngabe mikhulu noma mincane kangakanani, udinga ukwazi ukuthi ungahlela kanjani izinto.
Kulesi sifundo, uzofunda imithetho ejwayelekile yokuhlela, ukuthi uyisebenzisa kanjani kukanye nezinyathelo eziqondile ongazithatha ukuhlela impilo yakho, iqembu, inkampani noma ibhizinisi. Ngokufunda nokusebenzisa lolwazi, uzokwazi ukuthola impumelelo enkulu kuko konke okwenzayo.
Uma uzama ukwenza okuthile, ungangena enkingeni uma ungakwazi ukuhlela umsebenzi, iphrojekthi noma inkampani ohlanganyela kuyo noma oyisebenzelayo.
Igama elithi hlela lisho ukulungisa izinto nezenzo ukuze kulethe lokho okufunwa umuntu noma iqembu.
UkuHlela isigaba sezenzo nemisebenzi ehlukahlukene ukuze ibe ngekhethekile. Okukhethekile kusho ukuthi izinhlobo ezikhethekile zezenzo, izimfanelo noma imisebenzi yonke ifakwa esigabeni esisodwa bese ezinye izinhlobo zezenzo, izimfanelo noma imisebenzi ifakwe kwesinye isigaba nokunye.
Ungahlelela inani elithize lezenzo ukuthi ulenze. Ukukwenza lokhu, uzoqala ubone ukuthi yini okufanele yenziwe. Uzokwenza ongakwenza kuqala. Bese uyaqhubeka wenza ezinye izinto okudingeka uzenze njengoba ukwazi ukuzenza.
Ngokulandela lezi zinyathelo, uzokwazi ukuqeda kahle lokho okuqalile.
Iqembu lingahlelwa kahle ukuze ilungu ngalinye lalelo qembu liqede ngezenzo zalo ezikhethekile. Lezi zenzo ezincane zihlangana ukwenza umkhiqizo oqediwe ngokuphelele.
Umkhiqizo yinto eqediwe okungashintshiswana ngayo. Ukushintshisana kusho ukunikela ngokuthile okubalulekile ngembuyiselo yokuthile okubalulekile. Lokhu kungaba noma iyiphi insizakalo noma into. Umkhiqizo uba umkhiqizo lapho usuhanjiswe kumuntu ongaphandle kwenkampani. Noma ingadluliselwa kwelinye ilungu elingaphakathi enkampanini.
Ngale ndlela, iqembu lingafinyelela kwinjongo enkulu jikelele —okufana nokwenza noma ukukhiqiza okuthile noma ukuletha insiza.
Kunomehluko phakathi kokubona ukuthi abantu bayayenza imisebenzi yabo nokwenza umsebenzi ngokwakho. Abanye abantu banenkinga ngalokhu. Umuntu ophethe umsebenzi kwesinye isikhathi akakwazi ukuthi awuhlele kahle. Ngakho-ke abesezama ukwenza konke ngokwakhe. Uma eqhubeka nokuzama ukukwenza konke ngokwakhe, iqembu lakhe lizoqhekeka lehluleke. Kungani? Ngoba manje bonke abantu emsebenzini abasenawo umsebenzi wangempela noma imisebenzi okufanele bayenze. Imisebenzi yabo isithathwe ngumuntu oyedwa ophethe.
Kuliqiniso kona ukuthi umuntu onekhono kakhulu ekwenzeni okuthile angakwenza kangcono. Kodwa-ke, angeze enze okungaphezu kwalokho angakwenza. Kepha iqembu elihlelwe kahle lingenza okuningi kunomsebenzi womuntu oyedwa kuphela angawenza.
Umuntu onekhono kakhulu ekwenzeni okuthile angathola ukudumala ngoba abantu abamsebenzelayo bengenzi lokho abekulindele ukuthi bakwenze. Unokuzama ukukwenza konke ngokwakhe kunokuba enze iqembu lakhe lihleleke futhi lisebenze ngempumelelo ndawonye.
Uma iqembu lakho lingaphumeleli ngendlela ofuna ngayo futhi uma abantu bakho bengawenzi kahle umsebenzi wabo, kufanele uthathe izinyathelo ezimbili:
Bhekana nenkinga eseduze
Hlela iqembu lakho ukuthi lenze izinto ezinjalo futhi lenze iimisebenzi yalo
Ungabhanjwa kunombolo 1, ngenhla. Uma nje ubhajwa usazama ukubhekana nenkinga eseduze, ungalindela ukuba nenkinga futhi uzizwe usebenza ngokweqile. Lokhu kungenxa yokuthi futhi wehlulekile ukwenza inombolo yesibili, ukuhlela iqembu lakho.
Ngakho-ke ukwehluleka okukhulu kwanoma yiliphi iqembu ukwehluleka ukuhlela kahle.
Isizathu esikhulu sokungahleleli isenzo, inkampani, ngisho nasekhaya, ukungaqondi ukuthi kuhlelwa kanjani.
Isibonelo, isikhulu sitshelwa ukuthi sibhekele ukubona ukuthi iPhrojekthi X yenziwe. Akazi okuningi ngako. Unezisebenzi ezimbili ezaziyo. Okubi angakwenza ukuzama ukwenza iPhrojekthi X yena ngokwakhe. Noma anikeze imiyalo eminingi engenangqondo.
Into efanelekile ukuthi lesikhulu siyenze ukuthatha umqashwa onolwazi olukhulu ngokudingeka kwenziwe ukuba asebenze nomunye ukuthi abe ngumsizi wakhe. Bese ubatshela bobabili ukuthi basebenze kulephrojekthi. Ngemuva kwalokhu isikhulu kufanele manje sifunde kabanzi ngePhrojekthi X kepha hhayi ukuthi iphazamise abasebenzi abasebenza iphrojekthi.
Lapho isikhulu sesifunde okuningi ngephrojekthi, sesingabona ukuthi yenziwe futhi yenziwe kahle. Kepha uyekela abasebenzi ababeke kwiphrojekthi ukuthi bayenze.
Uma unephrojekthi ofuna ukuyenza, nansi indlela ongayenza ngayo:
Okokuqala thola ulwazi mayelana nezinto zonke okufanele zenziwe kwiphrojekthi.
Bese ubuthela ndawonye izinhlobo zezenzo ezifanayo ezidingekayo kwiphrojekthi umsebenzi ngamunye.
Manje nikeza lemisebenzi kubantu ukuthi bayenze.
Lapho usunikeze abantu imisebenzi yabo, lungisa izindlela zokuxhumana ukuthi zihambe phakathi kwamalungu eqembu lakho.
Nikeza iqembu lakho noma yiziphi izinto abazidingayo ukwenza imisebenzi yabo.
Hlela ezokuxhumana kanye nokubambisana nabanye abantu, amaqembu noma izinkampani njengoba kudingeka ukwenza iphrojekthi.
Ngemuva kokuthi konke lokhu sekwenziwe, into edinga ukwenziwa ukuthi amalungu eqembu akwazi ukuba matasa enza imisebenzi yawo.
Noma yimuphi umsebenzi, akunandaba ukuthi mncane kangakanani, kufanele uhlelelwe kahle.
Noma ngubani ophethe abantu kufanele akwazi ukuhlela izenzo noma imisebenzi ehlukahlukene okufanele yenziwe futhi akwazi ukusebenza yena futhi enze ukuthi umsebenzi uyenziwa.
Ukwehluleka yilokhu, umuntu ophethe uzokwenza okuncane kakhulu futhi asebenze ngokweqile. Futhi onke amanye amalungu eqembu akazukuba namsebenzi.
Kukhona isihloko esibizwa ngokuthi ukuhlela. Lesihloko sesenziwe kahle ngendlela elungisiwe uhlelo olungafundeka kalula. Ngokusifunda, ungaphumelela kulokho ozama ukukufeza.